IMessage र FaceTime सक्रिय गर्न असफल भयो आईफोन समाचार
केहि आईओएस users प्रयोगकर्ताहरू छन् समस्याहरू आईमेसेज र फेसटाइम सक्रियताका साथ तपाईंको भर्खरको अद्यावधिक गरिएको आईफोन, आईप्याड र आईपड टचमा। अद्यावधिकहरूको प्रारम्भिक भौंका समयमा केहि मुद्दाहरू देखा परेका थिए जुन एकै समयमा भइरहेको थियो, जब यसलाई आधिकारिक रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रयोगकर्ता एप्पल द्वारा पुनः डिजाइन गरिएको पछिल्लो आईओएस स्थापना गर्न अन्तिम बन्न चाहँदैन। तर आँधीबेहरी पछि शान्त आएपछि केही प्रयोगकर्ताहरूलाई आईमेसेज र फेसटाइम सेवाहरू सक्रिय गर्न समस्या भइरहेको छ।
दुबै केसमा अधिकत सक्रियता त्रुटि सन्देशहरू, दुबै आईमेसेज र फेसटाइमका लागि हुन्,सक्रियताको लागि कुर्दैI आईडाइभिस बिना अन्य कुनै प्रकार्यलाई जवाफ दिन वा «सक्रियताको क्रममा त्रुटि देखा पर्‍यो। फेरि प्रयास गर्नुहोस् "।
En आईप्याड समाचार हामी यस समस्या समाधान गर्न को लागी जाँदैछौं र ती उपकरणहरू जुन तपाईंसँग समस्या छ अन्तमा 100% परिचालन हुन सक्छ। तिनीहरूका लागि तपाईंले तल संकेत गरिएको चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
१.- यकिन गर्नुहोस् कि हाम्रो एप्पल आईडी iMessage र फेसटाइमका लागि सही तरीकाले कन्फिगर गरिएको छ।
iMessage। सेटिंग्स, सन्देश र iMessage मा क्लिक गर्नुहोस्। पठाउनुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँ हामी हाम्रो एप्पल आईडी र फोन नम्बर (यदि लागू भएमा) सहि छौं भनेर जाँच गर्नेछौं। एप्पल आईडी क्लिक गर्नुहोस् यदि प्रयोगकर्ता परिमार्जन गर्न यो सही छैन भने प्रयोगकर्ता परिवर्तन गर्न।
फेसटाइम। सेटिंग्समा, फेसटाइमले जाँच गर्दछ कि एप्पल आईडी सहि छ, ईमेल र ईमेल ठेगानाको साथ।
२- दुबै सेवाहरू बिच्छेदन गर्नुहोस्। एक पटक तपाईंको केसमा परिवर्तन वा तिनीहरूको पुन: स्थापना भएपछि, हामीले दुबै सेवाहरू निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ।
iMessage। सेटिंग्स, सन्देशहरू, निष्क्रिय गर्न विकल्प थिच्नुहोस्। हामी केहि सेकेन्ड पर्खन्छौं र फेरि ट्याबमा थिचेर यसलाई सक्रिय पार्दछौं।
फेसटाइम। सेटिंग्स, फेसटाइम निष्क्रिय गर्न विकल्प थिच्नुहोस्। IMessage को रूपमा, हामी केहि सेकेन्ड कुर्नुहोस् र यसलाई फेरि सक्रिय गर्नुहोस्।
Network. नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्।
Al नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्, तपाईले सबै Wi-Fi नेटवर्कहरू पुन: कन्फिगर गर्नु पर्छ जुन तपाईले पहिले गर्नु भएको थियो। सेटिंग्स, सामान्य, रीसेट र रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को माध्यम बाट पहुँच।
यदि उपकरण कोड द्वारा लक गरिएको छ भने, तपाईंले सेटिंग्स रिसेट गर्नु अघि यसको कुञ्जी हुनु पर्छ। सेटिंग्स रिसेट पछि, यो जोड्नुहोस् वाइफाइ जुन तपाईं सामान्य रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि iMessage र फेसटाइम काम जाँच गर्नुहोस्। उस्तै प्रणाली प्रयोग गर्ने कसैलाई एक iMessage पठाउनुहोस् (निश्चित हुन, जब तपाईं सम्पर्क चयन गर्नुहुन्छ यो निलो हुनेछ, पठाउनुहोस् बटनको साथ, यदि दुबै सम्पर्क र बटन हरियो छन् भने, तपाईंसँग iMessage छैन)।
फेसटाइमले प्रयास गर्दछ कि गर्दैन भनेर पत्ता लगाउन एउटा अडियो कल गर्नुहोस् भिडियो अघि। अडियो कलहरूले भिडियो कलहरू भन्दा कम ब्यान्डविथ प्रयोग गर्दछ, र हामीले पत्ता लगायौं कि उनीहरूले यस लेखमा उल्लेख गरिएको जस्तो समस्या निम्त्याउँदछन्।
-- आईडिभाइस पुन: सुरू गर्नुहोस्।
आईडीभिस बन्द गर्नुहोस् र फेरि खोल्नुहोस्। थिच्नुहोस् र पावर बटन होल्ड गर्नुहोस् जब स्लाइड टु पावर अफ विकल्प देखा पर्दछ, उपकरण बन्द गर्नुहोस्। यो खोल्नको लागि, तपाईंले केवल केही सेकेन्डको लागि पावर बटन होल्ड गर्नुपर्दछ।
अब यो कति हो जाँच गर्ने समय हो iMessage र फेसटाइम पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। एउटा iMessage पठाउनुहोस् वा फेसटाइम मार्फत कल गर्नुहोस्। सबै कुरा राम्ररी काम गर्नुपर्दछ।
यो अझै काम गर्दैन?
धेरै विशेष अवस्थामा यो हुन सक्छ। यसलाई समाधान गर्न सबै भन्दा राम्रो हो उपकरणलाई फ्याक्ट्री पूर्वनिर्धारितमा पुन: भण्डारण गर्नुहोस्। कुनै पनि जानकारी गुमाउनको क्रममा, हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा यसलाई आइट्यून्सको साथ जडान गर्नु र ब्याकअप गर्नु (यो प्रत्येक पटक जब तपाईं यसलाई जडान गर्नुहुन्छ स्वचालित रूपमा गरिन्छ)। जब तपाईंसँग पहिले नै जगेडा गरिएको छ, हामी सेटिंग्स, सामान्य र सामग्री र सेटि Deleteहरू मेट्ने पहुँच गर्दछौं। तलको सन्देश आई डिभाइस स्क्रिनमा देखा पर्नेछ: "सबै डाटा र सामग्री मेटिनेछन् र सबै सेटि .हरू रिसेट हुनेछन्।" हामी डिलीटमा क्लिक गर्दछौं।
सबै सेटि settingsहरू रिसेट भएपछि, आईओएस ले तपाईंलाई चरणहरूको जानकारी दिनेछ iMessage र फेसटाइम सहित सबै सेवाहरू सक्रिय गर्न अनुसरण गर्न। एकचोटि जाँच गर्नुहोस् कि सबै ठीक काम गर्दछ, दुबै iMessage र फेसटाइम समय हो यो फेरि आइट्यून्समा जडान गर्न र हामी पहिले बनाएको प्रतिलिपि संग iDevice पुनर्स्थापित गर्न।
अझै काम गरिरहेको छैन?
सम्भव छ कि नयाँ एप्पल आईडी सिर्जना गर्नुहोस् यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर यो लि linked्क गरिएको सबै विकल्पहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यसलाई प्राविधिक सेवामा लैजानु राम्रो हुन्छ, किनकि हुनसक्छ यो समायोजनको समस्या होइन, तर हार्डवेयरको हो।
थप जानकारी - आईओएस in मा वाइफाइ मुद्दाहरू फिक्स गर्नुहोस्, आईओएस battery मा ब्याट्री खपत अनुकूलन गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» IMessage र iOS7 मा फेसटाइममा सक्रियता त्रुटिहरू
फरमन्स्टरलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, तर यो "प्रमाणिकरणको लागि पर्खदै" देखा पर्दछ
नमस्कार साथीहरु, मलाई आईमेसेज र अनुहार समय को सक्रियता संग पनि समस्याहरु थिए, त्यसैले मैले समाधान फेला पारें एप्प्लिसेरा फोरममा, जाभाइरड्रम्स नामको केटाले समाधान दिन्छ,
“मैले यो समाधान गर्न सकेको छु। तपाईले प्रीपेड कार्ड किनु पर्छ र क्रेडिट लिनु पर्छ, म किन व्याख्या गर्नेछु: क्लारूले पेरूमा यसको योजनामा ​​समावेश गरेको टेक्स्ट सन्देशहरू विदेशमा सन्देशहरू समावेश गर्दैन, केवल राष्ट्रिय सन्देशहरू। आईमेसेज र फेसटाइम सक्रिय गर्न तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पठाउनु पर्छ (लन्डनमा)। एकचोटि तपाईंले क्रेडिट लोड गर्नुभयो, असक्रिय गर्नुहोस् (यदि तपाईं सक्रिय गर्नुभयो भने) इमसेज र फेसटाइम, आईफोन पुन: सुरु गर्नुहोस्। जब यो पहिले नै चालू छ, तपाईं यसलाई फेरि सक्रिय गर्नुहोस् र यो "सक्रियताको लागि प्रतिक्षा गर्दै ..." देखा पर्नेछ तर यस पटक १ वा २ मिनेटमा यो तयार हुनेछ किनकि यस पटक सन्देश पठाइएको थियो। आशा छ यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। फेसटाइम १ मिनेट पछि सक्रिय हुन्छ, iMessage को लागी यदि यसले केहि लामो समय लिन्छ भने। म आशा गर्दछु कि ती समस्या भएका मानिसहरूले यस उत्तरको साथ समाधान भेट्टाउँछन्। लिमा - पेरु बाट अ h्गालो "
यहाँ लिंक छ त्यसैले तपाईं यसलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ
मैले जेभियरड्रम्सले स indicated्केत गरें र यसले मेरो लागि काम गर्यो, मैले मेरो प्रीपेड रिचार्ज गरें र लागत लिमामा यहाँबाट ०.0.50० सेन्ट मात्र आयो।
यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, अचानक धेरैका लागि यो समाधान हो।
Giovisdesign लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ साँझ, म ओछ्यानमा छु, मैले iMessage समस्या समाधान गर्नका लागि प्रीपेड कार्डको साथ रिचार्ज गर्नुपर्दछ।
एलेम्पसारलाई जवाफ दिनुहोस्
यो टच आईडी सुरक्षालाई बाइपास गर्न फिंगरप्रिन्ट सिर्जना गर्ने प्रक्रिया थियो